Aung Ko Ko – GrandPric
Author: Aung Ko Ko
An experienced Technologist who specializes in sustainable Digital IT solutions and providing digital transformation roadmap.
Posted on January 30, 2018 April 27, 2019
Green IT ရဲ့အခွခေံကို တခါတရံမှာတော့ နားလညျခကျနိုငျပါတယျ။ IT မှာ ဘာလို့ Green ထညျ့ပေးရသလဲလို့ မေးစရာ ရှိပါတယျ။
ဥပမာပွရရငျတော့ အစိမျးရောငျ Green၊ လိမ်မျောရောငျ Amber၊ အနီရောငျ Red စတဲ့ Indicator meter gauge ကိုမွငျဖူးကွမှာပါ။ အစိမျးရောငျဆိုရငျ Safe Zone၊ လိမ်မျောရောငျ Amber ဆိုရငျ စိုးရိမျရတယျ၊ အနီရောငျ Red ဆိုရငျတော့ အန်တရယျရှိတယျ စသညျဖွငျ့ ယဘေုယအြားဖွငျ့ နားလညျလို့ရပါတယျ။
သတငျးအခကျြအလကျနညျးပညာ (Information Technology) ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုက သိတျကိုခတျေမှီနလေတေော့ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာကို အသုံးပွုလိုကျတာနဲ့ Efficient ဖွဈတယျ ထငျစရာပါ။ တကယျတော့ Computerized အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာရဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှေ အမြားကွီးရှိသေးတယျဆိုတာ သိတျမသိကွသေးပါဘူး။
အဖှဲ့အစညျးတဈခု သို့မဟုတျ အဲဒီအဖှဲ့အစညျးရဲ့ IT Department မှာ Green IT ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ အကြှမျးဝငျနဖေို့လိုပါတယျ။ Data Center တှမှော Total cost of ownership (TCO) လို့ချေါတဲ့ ကုနျကစြရိတျတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ Best Practices အကွောငျးပွောတဲ့အခါ Green IT ကိုခနျြထားလို့မရပါဘူး။
Green IT ဆိုတာ ပတျဝနျးကငျြကိုသာမကပဲ ကုနျကစြရိတျတှလြေော့ခနြိုငျဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈတယျဆိုတာကို စာစောငျတှမြေားစှာမှာ ဖျောပွရေးသားထားတာတှရှေိပါတယျ။
Green IT is not just about meeting environmental objectives;
it providesavery tangible opportunity to drive down costs.
From – bcs.org
ဒါဆိုရငျ Green IT နဲ့ပတျသကျတဲ့ လိုကျနာဆောငျရှကျမှုတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲဆိုတာ ကွညျ့ကွရအောငျ။
Product Longevity ဆိုတာကတော့ IT Equipment တှဖွေဈတဲ့ Desktop/Laptop/Server နဲ့ Network Equipment တှကေို ဝယျယူသုံးစှဲတဲ့အခါ ရရှေညျသုံးနိုငျတဲ့ အမြိုးအစားကိုရှေးခယျြရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မကွာခဏအသဈဝယျယူရတာတှေ Upgrade လုပျထပျမွှငျ့ရတာမြိုးတှလေုပျရတာ ​ငှကွေေးကုနျကွမှုမြားသလို အသုံးမလိုပဲစှနျ့ပဈရတဲ့အခါ ပတျဝနျးကငျြအတှကျလဲ မကောငျးပါဘူး။
ဒီအတှကျကွောငျ့ အဖှဲ့အစညျးတှရေဲ့ ကုနျပစ်စညျးဝယျယူရေးအဖှဲ့ (Procurement Team) နဲ့ အုပျခြူပျရေးပိုငျး (Management Team) မှာ Green IT နဲ့ပတျသကျတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှရှေိနဖေို့လိုအပျပါတယျ။
မကွာခငျမှာ သကျတမျးကုနျတော့မဲ့ (EOL – End of Life) ကုနျပစ်စညျးမြိုးကို မဝယျယူမိဖို့ကလဲ အရေးကွီးသလို ဝယျယူပွီးတဲ့ပစ်စညျးတှမှောလဲ တာရှညျခံပွီး လတျတလောဝနျဆောငျမှု (Maintenance Support) တှပေေးနိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
သက်ကရာဇျ ၂၀၁၀ ကစဈတမျးကောကျခကျြအရ Data Center တှရေဲ့ စှမျးအငျသုံးစှဲမှုဟာ တကမ်ဘာလုံးရဲ့ စုစုပေါငျး စှမျးအငျသုံးစှဲမှုရဲ့ ၁.၁% ကနေ ၁.၅% အထိရှိနပေါတယျ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစု စှမျးအငျဝနျကွီးဌာနရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအရ Data Center တှရေဲ့ စှမျးအငျသုံးစှဲမှုဟာ သာမာနျရုံးတှထေကျ အဆ ၁၀၀ ကနေ ၂၀၀ အထိပိုသုံးတယျလို့ခနျ့မှနျးပါတယျ။
Data Center တှရေဲ့ စှမျးအငျသုံးစှဲမှုကို တှကျခကျြတဲ့အခါ Power usage effectiveness (PUE) နဲ့ Data center infrastructure efficiency (DCIE) ကိုတှကျခကျြရပါတယျ။ PUE နဲ့ DCIE ဟာ Green Data Center တှတေညျဆောကျတဲ့နရောမှာ အဓိကကတြဲ့နရောမှာ ပါပါတယျ။ ဒီအောကျမှာပွထားတာကတော့ Schneider Electric က PUE နဲ့ DCIE ကိုတှကျခကျြတဲ့ Calculator ပါ။
Green Data Center တညျဆောကျမှုအတှကျ အခွားသော လိုအပျခကျြတှကေတော့ အအေးပေးမှုစနဈ (Cooling System) ပါ။ အအေးပေးစနဈ (Cooling System) မှာလဲ လအေေးပေးစနဈ (Air Based Cooling) နဲ့ ရအေေးပေးစနဈ (Liquid Based Cooling) ဆိုပွီးရှိပါသေးတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ လအေေးပေးစနဈ (Air Based Cooling) စနဈကိုအသုံးမြားကွပွီး ဒီစနဈမှာလဲ လပေေးပုံစနဈ (System) နဲ့ ပုံစံ (Design) ပျေါမှုတညျပွီး စှမျးအငျသုံးစှဲမှုအနညျးအမြားကှာပါသေးတယျ။
အခုအပျေါကပွထားတာကတော့ (Cold Aisle / Hot Aisle) လို့ချေါတဲ့ လအေေးပေးစနဈ (Air Based Cooling) တဈခုပါ။ ဒီစနဈဟာ အသုံးအမြားဆုံးဖွဈသလို စှမျးအငျသုံးစှဲမှုလဲ အမြားဆုံးပါ။
the more power you burn, the cooler the server room will be
ဒီစနဈဟာ “စှမျးအငျပိုသုံးလလေေ ဆာဗာခနျးပိုအေးလလေေ” ဆိုတဲ့အခွခေံကိုမှုတညျထားတာကွောငျ့ Efficient မဖွဈပါဘူး။
နောကျတဈမြိုးကတော့ Cold or Hot Aisle Air Containment စနဈပါ၊ ဒီစနဈမှာတော့ လပေူနဲ့လအေေးကို ခှဲထုတျလိုကျပွီး လိုအပျတဲ့နရောကိုသာ အအေးပိုပေးခွငျးဖွငျ့ ဆာဗာခနျးရဲ့အပှုခြိနျကို ထိနျးခြုပျပေးနိုငျပါတယျ။
နောကျတဈမြိုးကတော့ ရအေေးပေးစနဈ (Liquid Based Cooling) ပါ။ စကျရုံတှမှောတော့ ရနေဲ့အအေးပေးတာ မထူးဆနျးပမေဲ့၊ Data Center ထဲမှာတော့ ရနေဲ့အအေးပေးဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ထငျစရာပါ။ ဒါပမေဲ့ ရအေေးပေးစနဈ (Liquid Based Cooling) နဲ့ Data Center တှရှေိနပေါပွီ။
အောကျမှာပွထားကတော့ IBM ကတညျဆောကျထားတဲ့ ရအေေးပေးစနဈ (Liquid Based Cooling) Data Center တဈခုဖွဈပွီး စှမျးအငျသုံးစှဲမှုမှာ သာမာနျ လအေေးပေးစနဈ (Air Based Cooling) ထကျ ၄၀% ပိုသကျသာပါတယျ။
Green IT ရဲ့ ကနျြရှိတဲ့ဆောငျရှကျခကျြမြားကို နောကျအပိုငျးမြားမှာ ဖျောပွပါဦးမယျ။
Green IT ရဲ့အခြေခံကို တခါတရံမှာတော့ နားလည်ခက်နိုင်ပါတယ်။ IT မှာ ဘာလို့ Green ထည့်ပေးရသလဲလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။
ဥပမာပြရရင်တော့ အစိမ်းရောင် Green၊ လိမ္မော်ရောင် Amber၊ အနီရောင် Red စတဲ့ Indicator meter gauge ကိုမြင်ဖူးကြမှာပါ။ အစိမ်းရောင်ဆိုရင် Safe Zone၊ လိမ္မော်ရောင် Amber ဆိုရင် စိုးရိမ်ရတယ်၊ အနီရောင် Red ဆိုရင်တော့ အန္တရယ်ရှိတယ် စသည်ဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့် နားလည်လို့ရပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (Information Technology) ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုက သိတ်ကိုခေတ်မှီနေလေတော့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာကို အသုံးပြုလိုက်တာနဲ့ Efficient ဖြစ်တယ် ထင်စရာပါ။ တကယ်တော့ Computerized အဆင့်မြင့်နည်းပညာရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာ သိတ်မသိကြသေးပါဘူး။
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ IT Department မှာ Green IT ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ အကျွမ်းဝင်နေဖို့လိုပါတယ်။ Data Center တွေမှာ Total cost of ownership (TCO) လို့ခေါ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Best Practices အကြောင်းပြောတဲ့အခါ Green IT ကိုချန်ထားလို့မရပါဘူး။
Green IT ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသာမကပဲ ကုန်ကျစရိတ်တွေလျော့ချနိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို စာစောင်တွေများစွာမှာ ဖော်ပြရေးသားထားတာတွေရှိပါတယ်။
ဒါဆိုရင် Green IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။
Product Longevity ဆိုတာကတော့ IT Equipment တွေဖြစ်တဲ့ Desktop/Laptop/Server နဲ့ Network Equipment တွေကို ဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့အခါ ရေရှည်သုံးနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏအသစ်ဝယ်ယူရတာတွေ Upgrade လုပ်ထပ်မြှင့်ရတာမျိုးတွေလုပ်ရတာ ​ငွေကြေးကုန်ကြမှုများသလို အသုံးမလိုပဲစွန့်ပစ်ရတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လဲ မကောင်းပါဘူး။
ဒီအတွက်ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ (Procurement Team) နဲ့ အုပ်ချူပ်ရေးပိုင်း (Management Team) မှာ Green IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မကြာခင်မှာ သက်တမ်းကုန်တော့မဲ့ (EOL – End of Life) ကုန်ပစ္စည်းမျိုးကို မဝယ်ယူမိဖို့ကလဲ အရေးကြီးသလို ဝယ်ယူပြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာလဲ တာရှည်ခံပြီး လတ်တလောဝန်ဆောင်မှု (Maintenance Support) တွေပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သက္ကရာဇ် ၂၀၁၀ ကစစ်တမ်းကောက်ချက်အရ Data Center တွေရဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဟာ တကမ္ဘာလုံးရဲ့ စုစုပေါင်း စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုရဲ့ ၁.၁% ကနေ ၁.၅% အထိရှိနေပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ Data Center တွေရဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဟာ သာမာန်ရုံးတွေထက် အဆ ၁၀၀ ကနေ ၂၀၀ အထိပိုသုံးတယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။
Data Center တွေရဲ့ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို တွက်ချက်တဲ့အခါ Power usage effectiveness (PUE) နဲ့ Data center infrastructure efficiency (DCIE) ကိုတွက်ချက်ရပါတယ်။ PUE နဲ့ DCIE ဟာ Green Data Center တွေတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ အဓိကကျတဲ့နေရာမှာ ပါပါတယ်။ ဒီအောက်မှာပြထားတာကတော့ Schneider Electric က PUE နဲ့ DCIE ကိုတွက်ချက်တဲ့ Calculator ပါ။
Green Data Center တည်ဆောက်မှုအတွက် အခြားသော လိုအပ်ချက်တွေကတော့ အအေးပေးမှုစနစ် (Cooling System) ပါ။ အအေးပေးစနစ် (Cooling System) မှာလဲ လေအေးပေးစနစ် (Air Based Cooling) နဲ့ ရေအေးပေးစနစ် (Liquid Based Cooling) ဆိုပြီးရှိပါသေးတယ်။ များသောအားဖြင့် လေအေးပေးစနစ် (Air Based Cooling) စနစ်ကိုအသုံးများကြပြီး ဒီစနစ်မှာလဲ လေပေးပုံစနစ် (System) နဲ့ ပုံစံ (Design) ပေါ်မှုတည်ပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအနည်းအများကွာပါသေးတယ်။
အခုအပေါ်ကပြထားတာကတော့ (Cold Aisle / Hot Aisle) လို့ခေါ်တဲ့ လေအေးပေးစနစ် (Air Based Cooling) တစ်ခုပါ။ ဒီစနစ်ဟာ အသုံးအများဆုံးဖြစ်သလို စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလဲ အများဆုံးပါ။
ဒီစနစ်ဟာ “စွမ်းအင်ပိုသုံးလေလေ ဆာဗာခန်းပိုအေးလေလေ” ဆိုတဲ့အခြေခံကိုမှုတည်ထားတာကြောင့် Efficient မဖြစ်ပါဘူး။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ Cold or Hot Aisle Air Containment စနစ်ပါ၊ ဒီစနစ်မှာတော့ လေပူနဲ့လေအေးကို ခွဲထုတ်လိုက်ပြီး လိုအပ်တဲ့နေရာကိုသာ အအေးပိုပေးခြင်းဖြင့် ဆာဗာခန်းရဲ့အပှုချိန်ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ရေအေးပေးစနစ် (Liquid Based Cooling) ပါ။ စက်ရုံတွေမှာတော့ ရေနဲ့အအေးပေးတာ မထူးဆန်းပေမဲ့၊ Data Center ထဲမှာတော့ ရေနဲ့အအေးပေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရေအေးပေးစနစ် (Liquid Based Cooling) နဲ့ Data Center တွေရှိနေပါပြီ။
အောက်မှာပြထားကတော့ IBM ကတည်ဆောက်ထားတဲ့ ရေအေးပေးစနစ် (Liquid Based Cooling) Data Center တစ်ခုဖြစ်ပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမှာ သာမာန် လေအေးပေးစနစ် (Air Based Cooling) ထက် ၄၀% ပိုသက်သာပါတယ်။
Green IT ရဲ့ ကျန်ရှိတဲ့ဆောင်ရွှက်ချက်များကို နောက်အပိုင်းများမှာ ဖော်ပြပါဦးမယ်။
(၁) Green Computing – Wikipedia
(၃) What is Green IT? – aboutgreenit.co.uk
(၄) Data Center PUE – What Does It Mean? – datacenterknowledge.com
(၅) Data center cooling methods – submer
(၆) Welcome to IBM’s Supercomputer Waterworld of the Future – WIRED
တောငျးပနျလှာ။ ။ ဒီစာစောငျထဲမှာ အားနညျးခကျြ၊ ခြှတျယှငျးခကျြမြားစှာ ပါနိုငျသဖွငျ့ ပွငျဆငျဖတျရှုပေးစလေိုပါတယျ။